Akụkọ - Anyị Ga-akọwa Uru Pụrụ Iche nke Mgbapụta Ike fotovoltaic
1. Ike anyanwụ bụ ike na-adịghị agwụ agwụ, na ọgbọ nke ike fotovoltaic nke nchekwa dị nchebe ma nwee ntụkwasị obi na nsogbu ike na ihe na-adịghị agbanwe agbanwe na ahịa mmanụ ọkụ agaghị emetụta ya;
2, anyanwụ na-enwu n'elu ụwa, ike anyanwụ dị n'ebe niile, anyanwụ ike fotovoltaic na-adabara karịsịa maka ebe ndị dịpụrụ adịpụ na-enweghị ọkụ eletrik, na ga-ebelata iwu nke ike ntanetị dị ogologo na nnyefe akara ike;
3. Ọgbọ nke ike anyanwụ adịghị mkpa mmanụ ọkụ, nke na-ebelata ụgwọ ọrụ;
4, na mgbakwunye na nsuso, igwe ike fotovoltaic ike enweghị akụkụ ọ bụla na-akpụ akpụ, ya mere, ọ dịghị mfe imebi, ntinye dịtụ mfe, mmezi dị mfe;
5, igwe nke ike fotovoltaic ike agaghị ewepụta ihe mkpofu ọ bụla, ọ gaghị ewepụtakwa mkpọtụ, griin haus na gas na-egbu egbu, bụ ezigbo ezigbo ume. Ntinye nke usoro usoro 1KW fotovoltaic ike nwere ike belata nkwụsị nke CO2600 ~ 2300kg, NOx16kg, SOx9kg na ihe ndị ọzọ site na 0.6kg kwa afọ.
6, nwere ike iji ụlọ na mgbidi nke ụlọ ahụ rụọ ọrụ nke ọma, adịghị mkpa iburu ọtụtụ ala, na oghere ndị na-arụ ọrụ ike nke anyanwụ nwere ike ịmịkọrọ ike anyanwụ ozugbo, wee belata okpomọkụ nke mgbidi na ụlọ, belata ibu nke ime ụlọ ikuku.
7. Nrụpụta ihe owuwu nke usoro ihe ọkụkụ nke foto foto dị mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ, ndụ ọrụ nke ihe ndị na-arụ ọrụ ike dị ogologo, ọnọdụ usoro ike na-agbanwe agbanwe, usoro mgbake ike nke usoro ike dị mkpụmkpụ;
8. Ọnweghị oke oke oke ala sitere na ala; Enwere ike ịmepụta eletrik dị nso ebe a na-eji ya.